အသုံးဝင်သောဆော်ရဲလ်ကဘာလဲ - ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
နွေဦးအတွက်တကယ်အရည်ရွှမ်းအရသာမွှေးဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အရသာကိုခံစားချင်တယ်။ ထှနျးတ္ထုများတချို့လူများအတွက် contraindicated နေကြတယ်ဆံ့သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုး, ထိုကဲ့သို့သောဆော်ရဲလ်အဖြစ်အချို့သောအပင်များကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်စေပါဘူးအတွက်ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်။
ဆော်ရဲလ် - ဖွဲ့စည်းမှု
လူငယ်တို့အရွက်မသာ၎င်းတို့၏မူလတောက်ပအရောင်နဲ့အချဉ်အရသာ, ဒါပေမယ့်လည်းကြွယ်ဝသောဓာတုဖွဲ့စည်းမှုမှကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဗီတာမင် C, K သည်, E နှင့်အဖွဲ့ကို B ကို, ဒါပေမယ့်လည်းဓါတ်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံနှင့်အက်ဆစ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏရှိပါတယ်ဆော်ရဲလ်။ ဒီအစိမ်းရောင်သတ္တုဓာတ်ခုနှစ်တွင်, ဥပမာ, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ဖော့စဖောရက် , သံ, မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အခြားသူများ။ လူအတော်များများသာ 21 ကယ်လိုရီများအတွက် 100 ဂရမ်အကောင့်နှုန်းအသုံးဝင်သောဆော်ရဲလ်လူငယ်စိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီထုတ်ကုန်ကားအဘယ်သို့စဉ်းစားမိခြင်း, ဒါကြောင့်စွမ်းအင်တန်ဖိုးတန်ဖိုးနှင့်အနိမ့်။
ဒါဟာပုံမှန်စေရန်ကူညီပေးသည် သွေးပေါင်ချိန် ။ အရွက်နှင့်အမြစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်နှလုံးပေါ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချ, လျှော့ပေါ့သွေးကြောနှင့်သွေးလွှတ်ကြောများ၏ကြွက်သားအပေါ်ပြုမူရာပိုတက်စီယမ် oxalate, အများကြီးပါဝင်သည်။
ပုံမှန်စားသုံးမှုဟာကင်ဆာ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ဤသည်ဓါတ်တိုးဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်သောစက်ရုံ glycosides ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့, သူတို့သည်အခမဲ့အစွန်းရောက်များ၏ပျက်စီးခြင်းအထောက်အကူပြုသည်။
ဆော်ရဲလ်ကြောင့်မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသောအရာဗီတာမင် A, ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်မှကျေးဇူးပြုတတ်၏။ ထိုကြောင့်အိမ်ခြံမြေများ, သက်ကြီးရွယ်အိုလူတို့အဘို့အကြံပြုဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိပါတယ်။
ကြောင့်ပထမဦးဆုံးနွေဦးပေါက်အစိမ်းရောင်ကို C ဗီတာမင်များ၏ပမာဏမှ beriberi ကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားသည်နှင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းကူညီပေးသည်။
အရွက်ပြည်တွင်းရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းပြင်ပကုသမှုများအတွက်သာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာ, ရေယုန်များအတွက်ထိရောက်သောသောငါးပိထံမှ လုပ်. , ဖျော်ရည်အရေပြားယားယံခြင်း, ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းသက်သာသည်။ ဒါဟာသီးဖျော်ရည်ကိုခံတွင်းနှင့်နှုတ်ခမ်းအတွက်အဖုရှင်းလင်းကြောင်းအစွမ်းထက် antioxidants များပါဝင်သည်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။
အဆိုပါပြုတ်ရည်ကြောင့်အလေးချိန်ပစ်ချင်သူကိုလူကောင်းတွေဖြစ်ပါသည်, အဆိပ်ဆားကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အဆီပင်အစစ်ခံဖို့ကူညီပေးနေသည်, အခြောက်အရွက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး Diuretics ဆီးအရေးယူပြင်ဆင်သည်။
မိန်းမတို့အဘို့ဆော်ရဲလ်၏အသုံးပြုမှုကိုထိုကဲ့သို့သောလျော့နည်းသွားချွေးအဖြစ်သွေးဆုံး၏မနှစ်မြို့ဖွယ်လက္ခဏာများ, ပပျောက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်တည်ရှိသည်, သွေးဖိအားကိုဖတ်ပုံမှန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အသုံးဝင်သောတ္ထုများနှင့်အတူပြည့်နှက်နေသည်။
ဒါကြောင့်ဆံပင်၏အခြေအနေအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ရိုးရာအလှကုန်ကိုသုံးပါ။ သငျသညျဆော်ရဲလ်အပေါ်အခြေခံပြီးကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ aqueous ဖြေရှင်းချက်လျှောက်ထားပါက follicles ဆံပင်ကောက်ကောက်ထွန်းလင်းနှင့်တောက်ပပေးတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်မကြာခဏခေါင်းကိုက်ရှိပါက, ထို့နောက်ရိုးရိုးဆော်ရဲလ်၏သီးဖျော်ရည်ကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ထိုပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ ကဒူလာနှင့်တီဘီရောဂါကုသမှုအတွက်ထိရောက်သော tool ကိုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ရှေးခတျေကဘေးဥပဒ်ကုသရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒါဟာအဆိပ်၏အသွေးသန့်ရှင်းရေးဘို့အကောင်းတစ်နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာနှစ်ပတ်အတွင်းတစ်ကြာချိန်တစ်သင်တန်းကိုခံယူဖို့အကြံပြု, ဒါကြောင့်သင်ဖျော်ရည် 50-60 ml ကိုသောက်ရမယ့်အစာစားပြီးနောက်လိုအပ်နေပါသည်။ ဒါဟာအဆိပ်ဥပမာ, အရက်အပြီးလေးနက်အကျိုးဆက်များမှာများစွာသောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပါလိမ့်မယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့အသီးဖျော်ရည်ဟာနှာ sinuses ရောင်ခြင်း၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆဲအမြစ်တစ်ခု decoction ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီရိုးရာဆေးတစ်လက်နှင့်အတူ rhinitis နှင့် sinusitis နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင့်အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖို့, ဒီစက်ရုံနာ, ဝဲနာများကုသရာတွင်ထိရောက်စဉ်းစားသည်။
ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏မူမမှန်၏ရှေ့မှောက်တွင်မှာမကောင်းတဲ့မစင်ယူရစ်အက်ဆစ်အရာ၌၎င်း, ဆားကဂရုတစိုက်သူတို့ရဲ့ menu ကိုများအတွက်ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဆစ်များတွင်အပ်နှံကြသည်။ ဒီထုတ်ကုန်တားမြစ်သည်ကတည်းကအသုံးဝင်သောဆော်ရဲလ်မြင်းဂေါက်နှင့်အတူအဘယျစိတ်ဝင်စားနေသောလူများ, စိတ်ပျက်ဖို့ရှိသည်။ ဤသည် oxalic acid ကိုသာအခွအေနကေိုပိုဆိုးစေသည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ဆော်ရဲလ်အများကြီးကိုစားလျှင်, ဂေါက်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသည်ဟုစိတ်တွင်ကိုထမ်းရန်အရေးကြီးပါသည်။
ကနျြးမာရေးအခွအေနေပိုမိုဆိုးရွားဖို့မသကဲ့သို့ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူပြည်သူ့ဂရုတစိုက်, သူတို့ရဲ့ menu ကိုများအတွက်ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုသူနှင့်တားမြစ်ထားသောအစားအစာများကိုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်စာရင်းရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့, သင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူဆိုက်သို့မဟုတ်မနိုငျသညျ, သငျသညျကိုသာသေးငယ်တဲ့ပမာဏ, ဒီအစိမ်းရောင်လုပ်နိုင်တဲ့ရှိကွောငျးကိုသိသင့်ပါတယ်။ ငွေရတတ်သောသူဓာတုဖွဲ့စည်းမှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဇီဝြဖစ်၏စီးဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုပုံမှန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆီးချိုရောဂါမကြာခဏအထိုင် contraindicated သောအခြားရောဂါများဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။
လိပ်ခေါင်းအဖြစ်တစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပြဿနာရှိသည်သောလူများ, လုံခြုံစိတ်ချစွာဒီဌာပနာမုဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သင်၏အစားအစာအစားအစာထဲမှာပါဝင်သည်နှင့်ရိုးရာဆေးပညာသင့်လျော်သောနည်းလမ်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ ဆော်ရဲလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအပျော့စား laxative သက်ရောက်မှုရှိသည်သောဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများသက်သေပြ။ ဒါဟာစအိုတွင်း, လိပ်ခေါင်းနှင့်သားအိမ်သွေးထွက်အတွက်၎င်း၏အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုသက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအသုံးဝင်သောဆော်ရဲလ်ကဘာလဲဆိုတာမသာသိရန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်း decoction ပြင်ဆင်သောက်ဖို့ဘယ်လို။
ဆော်ရဲလ် - 50 ဂရမ်,
အဆိုပါဟင်းရည် strain နှင့်အေးမြ, ပြီးတော့ 1/3 အနုပညာထိုသို့တနေ့သုံးကြိမ်သောက်ပါ။
အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကပင်, ဆန့်ကျင်ပေါ်, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစာခြေစနစ်အသုံးဝင်သောဆော်ရဲလ်ကဘာလဲဆိုတာအကြောင်းအတိအကျအဖြေကိုပေးစေခြင်းငှါမဖြစ်နိုင်ပေ။ အစိမ်းရောင်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုတိုးတက်အောင်, အစာအိမ်နှင့်ပန်ကရိယကင်ဆာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးပွါးကြောင်းသေးငယ်တဲ့ပမာဏသာရှိသည့်အခါအသုံးပြုခဲ့သည်။ အနိမ့်အချဉ်ဓာတ်နှင့်အတူ gastritis ရှိသည်သောလူများကခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ။ အစာအိမ်အသီးဖျော်ရည်၏တိုးလာထုတ်လုပ်မှုလူနာရဲ့အခွအေနေအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ဗိုက်အစာအိမ်နာနှင့်အတူဆော်ရဲလ်ပိတ်ပင်ခဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့, ကသင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့်အတူတိုင်ပင်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ပန်ကရိယရောင်ခြင်းတစ်ဦးအချဉ်အရသာနှင့်သင်၏အစားအစာနွေဦးအစိမ်းရောင်ကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေ၌, အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ဆော်ရဲလ်ဆကျဆံကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး, သူသည်ပန်ကရိယအဘို့အန္တရာယ်ရှိသည်အဘယ်အရာ:
ဒါဟာဆီးအိမ်နှင့်သည်းခြေပြွန်ထဲမှာဖြစ်ခြင်းထားတဲ့ oxalate ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်သည်းခြေထွက်သွားလုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုဆိုးဝါးလာ, ဤပန်ကရိယကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။
အဆိုပါစက်ရုံပန်ကရိယ၏ exacerbation စဉ်အတွင်းထိခိုက်စေနိုငျသော cholagogue အရေးယူထားပါတယ်။
စာရင်းများအရအသည်းပြဿနာများနှင့်အတူလူများ၏အရေအတွက်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ အခြေအနေများ၏မြန်ဆန်အောင်မြင်သောကုသမှုတစ်ခုမှာတစ်ဦးသင့်လျော်သောအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာဆော်ရဲလ်ရှိမရှိအသည်းပြဿနာများအတွက်အသုံးဝင်သောတွေးမိ, ဒါကြောင့်ကြောင့် hrizofanovoy အက်ဆစ်ရဲ့အူ Motilal တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်သည်းခြေများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆျော။ အဓိကအရာချက်ပြုတ်နည်းများစိမ်းလန်းသောတစ်နည်းနည်းကိုသုံးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသည်းရောဂါကူညီရိုးရာချက်ပြုတ်နည်းများရှိပါတယ်။
ဆော်ရဲလ်အမြစ် - 30 ဂရမ်,
ရေ -6ဇွန်း။
ပိတ်သိမ်းပြီးနောက်ရိတ်က္ခာကာလ, မီးလျှံကို turn off, အခြားသော 45 မိနစ်ထွက်ခွာမည်။
အသုံးပြုမှု, strain နှင့်သုံးကြိမ်ခင်မှာတစ်ရက်သောက်သုံးသောအကြောင်းကို 1/2 အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာသွေးထဲမှာဟေမိုဂလိုဘင်အတွက်တိုး၏ပြဿနာကိုရည်မှတ်ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အသေးစိတ်အတွက်ဒီကိစ္စကိုသို့ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ , အသုံးဝင်သောဆော်ရဲလ်ကဘာလဲဆိုတာအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အမြင်ကိုဟူမူကား, အတော်များများကကြောင့်အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏမှအစိမ်းရောင်သံများစုပ်ယူမှုတိုးပွါးကြောင်းငြင်းခုန်။ ဟေမိုဂလိုဘင်တိုးမြှင့်ဖို့ဆော်ရဲလ် utility ကိုငြင်းဆိုသူကိုသိပ္ပံပညာရှင်များရှိပါတယ်။ သူတို့ကစိမ်းလန်းသောသံစုပ်ယူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ရာ oxalic acid ကိုရှိကြောင်းပြောနေသဖြင့်ဒီရှင်းပြပါ။
ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုပိုတက်စီယမ်ရှိပြီးကတည်းကအများအပြားကနှလုံးရောဂါများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်အဘယ် myocardial အတွက်ဆော်ရဲလ်ကူညီပေးသည်, ထိုဆရာဝန်ကိုမေးပြီးတော့အဲဒီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအလုပ်လုပ်တကယ်တော့မည်မဟုတ်ရရှိလျှင်, ဒီထုတ်ကုန်နှလုံးရောဂါများအတွက် contraindicated ဖြစ်ပါတယ်။ oxalic acid ကိုအားလုံးအမှားရှိနေခြင်း။ myocardial မုန်လာဥ, အနက်ရောင် Currant နှင့်ဆီးဖြူကိုစားပြီးနောက်အပြင်, ကအကြံပြုသည်မဟုတ်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံသို့ ဝင်. အကယ်. သင့်လျော်သောအစားအစာ , ကအကောင့်သို့တစ်ခုချင်းစီထုတ်ကုန်၏အကျိုးကျေးဇူးများယူရန်လိုအပ်ပေသည်။ သငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့လိုသူအမြိုးသမီးမြားအဘို့အအသုံးဝင်သောဆော်ရဲလ်ကဘာလဲ, စိတ်ဝင်စားပါက, အဲဒီနောက်အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
အမြောက်အမြားအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိပါတယ်ဆိုပါကတစ်ဦးပျော့ laxative အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
ဆော်ရဲလ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း, ကဒါရေ 100 ဂရမ်သာ 22 ကယ်လိုရီအဘို့အကောင့်, ထုတ်ကုန်များ၏ကယ်လိုရီ content တွေကိုသတ်မှတ်နှင့်အနိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာအချို့ကိစ္စများတွင်အက်ဆစ်အစိမ်းရောင်ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိထားရန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါကြောင့်သင်အကောင့်သို့တည်ဆဲ contraindications ယူသင့်ပါတယ်:
ဆော်ရဲလ်အတွက် Oxalic acid ကိုကျောက်ကပ်အတွင်းရှိပြဿနာများကိုရှိသည်သောလူတို့အဘို့ထုတ်ကုန်အန္တရာယ်ရှိစေသည်။
ဒါဟာဒီရောဂါပြဿနာများ၌ရှိသကဲ့သို့, ဂေါက်ရောဂါကိုများအတွက် Menu ထဲမှာထည့်သွင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပေ
gastritis နှင့်များအတွက်ထုတ်ကုန် Allowed မြင့်မားတဲ့အချဉ်ဓာတ်တွေနဲ့အစာအိမ်နာ နှင့်အူတခြားရောင်ရမ်းအခြေအနေများ။ ဤသည် oxalic acid ကိုအခြေအနေကစိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
သံပုရာ - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး
ပျားရည် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
နို့နှင့်အတူလက်ဖက်ရည် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
ဘယ်နှစ်ယောက်ကယ်လိုရီ aspic သနည်း
ကလေးတစ်ဦးအတွက် Stomatitis -2နှစ်က
ကော့ကေးဆပ်အရသာဟင်းလျာများအဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများ - စပျစ်သီးအရွက်များတွင် Dolma
စကားပြန် Dream - ကလေးများအိပ်မက်မက်သောထိုသူငယ်,
Elton John ၏ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
ကလေးများအတွက် laryngitis ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သူမ Sean Penn အတူတက်ဖဲ့ဘာဖြစ်လို့ Charlize Theron ပထမဦးဆုံးအကိုပြောသည်
ဖနွမ်းပင် - ဆွဲဆောင်မှုများ
ဒီရောဂါ "2016 ခုနှစ်ဂရမ်မီ" အတွက် Rihanna ၏မရှိခြင်းစေခဲ့ပါတယ်
ယုန်အတွက် Myxomatosis - ရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်၎င်း၏ကုသမှု
တစ်ဦးဟမ်းစတား Dzhungarian ဘို့ဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အစားအသောက် "7 ပွင့်ချပ်" - နေ့စဉ် menu နဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများ